Xiddiga ka tirsan Barcelona oo dhaleeceeyay habdhaqanka tababare Ernesto Valverde – Gool FM
Xiddiga ka tirsan Barcelona oo dhaleeceeyay habdhaqanka tababare Ernesto Valverde
(Barcelona) 11 Sebt 2019. Xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dhaleeceeyay habdhaqanka tababare Ernesto Valverde ee xilli ciyaareedkan, kaddib markii uu ka saaray liiska xiddigaha uu ku xisaabamo, kulamadii dhawaan ay kooxda ciyaartay.
Laacibka khadka dhexe reer Spain ee Carles Aleñá oo ku soo bilaawday kulankii furitaanka horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan ay kula ciyaareen kooxda Athletic Bilbao, kaasoo ay ka soo gaartay guuldaro 1-0 ah, ayaa u arka in habdhaqanka tababare Ernesto Valverde aysan jirin wax sharaxaad ah ee laga bixin karo.
Carles Aleñá ayaa wareysi uu ku bixiyay Radio “Rac1” ee dalka Spain ayaa wuxuu ku sheegay:
“Ma jirto wax sharaxaad ah ee ku saabsan inaan ciyaarin tan iyo kulankii Athletic Bilbao, mana jiro xiddig jecel inaan loo yeerin, waa go’aan ku jira gacanta tababaraha, laakiin waxaa xaqiiqo ah inay saameeyn ku yeelaneyso ciyaaryahanka”.
“Xaqiiqdii dhalinyaradu isma dhiibaan, waxaan doonayaa inaan u dagaallamo booskayga, si aan kaga mid noqdo shaxda koowaad ee kooxda”.
“Waxay ila tahay in dhamaan ciyaartoyda ku sugan kooxda ay noqdaan kuwo muhiim ah, waxaan ku kalsoonahay 100% inaan awoodo inaan wax ka badalo xaalada aan haatan ku suganahay, wadada kaliya aan kaga bixi karo ayaa waxay tahay inaan si adag u shaqeeyo, si ay xaalada isku badasho, waxaan doonayaa inaan ku guuleysto Barcelona”.
Mar wax laga weydiiyay sii joogitaanka xiddiga reer Croatia Ivan Rakitić ee kooxda Barcelona, aya wuxuu ku jawaabay:
“Tartanka wuxuu naga dhigayaa kuwo fiican, waana sababta aan u shaqeyno”.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain oo tooshka ku ifiyay xirfada Marcelo ee Real Madrid, tan iyo imaatinkiisa 2007-dii
Ramos oo ka hadlay xiddiga u qalma ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d'Or 2019… (Messi, Ronaldo Mise Van Dijk?)